Travelogue dream cishe konke nabenzi bamabhayisikobho ukuthi kukhona ifike. horror movie, okungase cishe wachazwa njengomuntu "izivakashi isicupho", kungaba kakade iyibhulogi ehlukile ye-uhlobo eshaqisayo. Futhi isakhiwo banayo kucishe - the Backpackers kuwubuwula futhi kuyisidala ukwazi ukuthola ibandla likaJehova kuleli hlane, lapho komakhalekhukhwini musa ukubamba isiginali, lapho befa ngamunye ngamunye kusukela Maniac izandla cannibal, Bigfoot noma ezinye asabekayo. Kukhona phakathi lezi amafilimu neyaziwayo omkhulu wamabhayisikobho ashisa izikhotha, egcwele zokusebenza kwengqondo nemicabango nhlekelele, kukhona ukwehluleka ukwenza ukusebenza ecasulayo. Noma kunjalo, le ndawo, nabo bonke ibinombukiso zashtampovannosti akaphelelwa udumo, imidwebo edume kakhulu phakathi kinotecheniya echazwe yilezi: "Edene Lake", "amanxiwa", "umngcele", "Turistas," "Ihostela", "Vula Engalungile" "Izintaba Sinamehlo," "Utshani izinja" futhi ifilimu "Akuvunyelwe zone."
Isimo ayikwazi ukushintshwa
Sekuyisikhathi eside eChernobyl kwaba hhayi esivumelwaneni njalo. Le ndawo iyi-nhlekelele embi kangaka ukuthi sekuyinkinga engcwele, into ngisho ezingaqondakali ngesikhathi esifanayo uma tayaschim usongo futhi bavikele into eyesabisa, tayaschego usongo. Akumangalisi ukuthi abenzi mafilimu ezivela emazweni ehlukene ngenkuthalo ukusizakala isithombe eChernobyl e-imisebenzi. Kungaba izinto ezingcwele ngempela hhayi ukusebenzisa impahla evundile kangaka. Lapho abanye babe kusheshe Oren Peli, umdali ovelele franchise, "Paranormal Umsebenzi." Siyabonga kuye, ngo-2012, ngokwesilinganiso, kwakubikwa horror "Zone Forbidden" (abadlali: J. Sadowski, D. Kelly, N. Phillips, D. McCarthy, J. Berdaliev).
Eshibhile kodwa kakhulu
Ngemva ongaphakeme-isabelomali, kodwa pretty umxhwele "Paranormal Activity" ababukeli ngabomvu ngo-Oren Peli elilandelayo isambulo uthukuthele. Futhi safike akhiqizwa ezishibhile horror movie mayelana misadventures zezivakashi-Americans lihlaselwe Pripyat izidalwa ezisesimweni sokuguquka humanoid. Ngenxa flat, izinhlamvu izimpawu, imiphumela ekhethekile slipshod umqondisi umsebenzi Bredli Parkera Isibhekwa pretty cool kanye nezethameli kanye baxgeki.
Storytelling izithombe "Zone Forbidden" (lapho abadlali kukhona yobudala efanayo izinhlamvu sakhe) iqala neqiniso lokuthi eziyisithupha baseMelika-izivakashi (UNatalie, Chris, uPawulu, u-Amanda, uMichael futhi Zoe) ziza Ukraine. Ukufunda izinkambo, wahlela kule indawo okungayi, ngokushesha ukuqasha Umhlahlandlela ex wezempi Yuri futhi wathumela ekuzijabuliseni kakhulu. Ntambama abakwazi ukuzwa emkhathini egcwele enemisebe, idolobha eyihlane. Kodwa lapho kuqala bumnyama siyavuka Pripyat. Inhliziyo-rending ukukhala ukuqasha lomoya, abasha buhlanganisa uvalo yangempela. Bona awuwedwa kule ndawo efile.
Film baxgeki futhi townsfolk abavamile bathole okuningi punches futhi kwamaphutha in the film "Zone Forbidden", abadlali abenza indima izivakashi engajabule phakathi kwabo. Nokho, izici zabo ezihlukile amagugu olukhethekile ukubukeka akuzona, njengasezindaweni eziningi isikhathi-ngokugcina izilaleli ubona izinhlamvu ithunzi. Izinhlamvu eziningi e umlingisi we ebusweni kwembuleka. Usinga kungcono ngokwanele ukuba uzizwe of the movie ukujula, kodwa hhayi imizwa, nemizwa nemizwelo olutholwa izinhlamvu ukujula. Zonke izinhlamvu main stereotyped futhi izifanekiso. Abanye-ke Kuyanyanyisa, kodwa iningi ke amuncwa umzimba. Ekwenzeni umvuthwandaba isithombe ngaphesheya izingcezwana nge oyibamba okuyisibonelo. "Zone Forbidden" Lona umbono ngemva kokubuka le behluleli bama-movie.
Abadlali badlala indima esemqoka, ayinawo isilinganiso kusukela baxgeki. Ukwehluka umlingisi Natana Fillipsa - UMike. Isimanga siwukuthi kodwa uthi phezu ingxenye ochwepheshe ukuthi mancane amathuba, kuba ngokungangabazeki sokunconywa umlingisi abasha. Ngo namabhayisikobho umlingisi Australian Nathan Phillips wangenela ku ewuchungechunge yethelevishini "Omakhelwane", nodumo bamlethela ifilimi "Wolf Creek". Ngemva iqhaza kule phrojekthi, umlingisi waqala Hollywood umsebenzi wakhe. Phakathi ifilimu usebenza izindima US kumafilimu ezifana "Snakes on a Plane," "Ngaphansi hood", "Usuku Olukhulu", "West", "Surfer", "Ukomela isivinini", "Balibo".
Bright njengoba ilanga Devin Kelly
Lo mlingisi American odlale izindima ezingaphezu kwezingu-10 e-movie. Kodwa onohlonze kakhulu ifilimu imisebenzi okwamanje iyona "ukukhishwa zone". Kulo nyaka ukuze iqhaza umsebenzi Bredli Parkera intombazane wenziwa indiba ekulu ochungechungeni TV "Ukubusa komthetho", okuyinto kwakuzophela ngokushesha ivaliwe, njengoba leyo isilinganiso edingekayo. Devin Kelley, kanye wokhela esikrinini esikhulu, wamukele isimemo esivela Abadali yochungechunge TV "Operations Imfihlo" futhi "Uvuko". Buciko indima umlingiswa oyinhloko lensikazi Amanda, intombazane ephethwe ukusinda kokuhilizisana ezilo, futhi fated ukufa ezandleni abophiko lwezokuphepha (Ayikho Yokuzindla), actress wathola umfutho ezidingekayo ekuthuthukiseni ifilimu umsebenzi wakhe.
Zonke abalandeli-movie mayelana imizi echithekileyo, futhi amakhaya acekelwe phansi kanye nalabo abangekho ngokuqondile nesithakazelo isihloko kwenzeka le nhlekelele yaseChernobyl kuyoba okungenani curious okungenani kanye ukubona movie futhi ubone kinolegendoy olandelayo we indawo okungayi ngokuvumelana abenzi mafilimu, "Zone Kuso." Abadlali badlala indima esemqoka, wasinikeza okufingqiwe in a interview nabezindaba.